Abasebenzisi be-Samsung baneliseke kakhulu kune-Appleq | Izindaba ze-IPhone
Abasebenzisi be-Samsung baneliseke kakhulu kune-Appleq
Muva nje impi encane ekhathele phakathi Apple ne-Samsung Kuncane ukuhleleka kosuku, kucatshangelwa ukuthi ama-fanboys aphelelwe amandla ezikhathini zamuva. Ngaphandle kwakho konke lokhu, usuvele uyazi ukuthi ukwaneliseka komthengi wokugcina kuyinto ebaluleke kakhulu ukudlula ukushisekela okudala.
AbakwaSamsung bayihlwithe indawo ephambili yakwa-Apple maqondana nokwaneliseka kwamakhasimende e-United States of America. Izindaba ezibalulekile ezibheka ukuthi (okungenani inqobo nje uma ngikhumbula) indawo yokuqala ibilokhu ingeyenkampani yeCupertino ngenxa yezizathu zakudala.
Ngokusho kwe- Inkomba yokwaneliseka kwabathengi baseMelika, inkampani yaseNingizimu Korea ithole amaphuzu aphelele angama-81, okulingana ngokuphelele amaphuzu ayo kusuka ngonyaka odlule. Okwamanje, I-Apple iwile kule nkomba ngo-2% uma kuqhathaniswa nonyaka odlule we-2020, usezingeni lesibili ngamaphoyinti angama-80 esewonke futhi exhumanisa neGoogle ne-Motorola, eyokugcina ingeyenkampani yaseChina iLenovo. Izikolo ezihamba phambili ezihamba phambili ze-Samsung ezingeni lefoni ephathekayo zithathwa yi-Galaxy Note 10+, i-Galaxy S10 + ne-Galaxy S20 +, inamaphuzu aphelele azungeze amaphuzu angama-85.
Konke lokhu kunelukuluku uma kubhekwa ukuthi i-United States of America imvamisa iyindawo ye-Apple, ikakhulukazi ocingweni. Khonamanjalo i-Apple ithinta amaphuzu angama-82 nge-iPhone 11 Pro, i-iPhone 11 Pro Max ne-iPhone XS endala. Ungahlola imiphumela ephelele kuwebhusayithi esemthethweni yenhlangano ukusetshenziswa okwenze ukuhlaziywa. Impela umehluko wamanani ubalulekile ukuze abasebenzisi bakwazi ukunciphisa ibhalansi, noma ngukuthi iSamsung Galaxy A20, isiginali esiphakathi nendawo, iyangena.
Uma lezi zinhlolovo zokwaneliseka zenziwa eSpain UXiaomi kungenzeka athathe izikhundla eziphezulu njengoba wenza maqondana nokuthengiswa konyaka, akunjalo?
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » Izaziso » Abasebenzisi be-Samsung baneliseke kakhulu kune-Appleq
Amadivayisi amasha akwa-Apple angene ezitolo ngoLwesihlanu